Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: diso fotoana | NewsMada
Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: diso fotoana
Nanontany tena daholo ireo olona nahita ny hetsika nokarakarain’ny fanjakana antenantenan’andro tsy nampozina teny amin’ny fasan’ny olom-pirenena mahery fo, na manana ny fahamendrehana manokana noho ny fanompoany firenena aza. Razan’ny manamboninahitra tao anatin’ny fitondrana tamin’ny androny no nomena voninahitra tamin’ny famindrana azy tao amin’io toerana natokana ho fialan-tsasatry ny olona asandratra ho olomanaga mendrika ny firenena io.
Inona ary no nitarika ny fitondrana hisafidy an’izao tonon’andro izao hanaovana an’ity hetsika fanandratana an’ireto tompom-pahefana fahiny izay nitrangan-doza efa efapolo taona mahery ka namoy ny ainy tamin’ny loza anabakabaka. Vao mainka nitombo ihany ny fifampanontanian’ny mponina raha nisy nampatsiahy fa misy adino angamba ny sasany izay maty tamin’ny fisehoan-doza mitovitovy ihany ary nifanakaikikaiky tamin’izany teo amin’ny fotoana. Sanatrian’izany ve dia ady koropaka toy ny zavatra notapahana maimaika ny fanatontosana azy ? Inona ary no nahamaika ? Tsy mitady lavitra ny olona. Inona moa ny resaka mahaliana ny mponina amin’izao fotoana izao afa-tsy ny fifidianana efa mandondona ? Inona ary no mety ho fifandraisan’ny fifidianana amin’
ity famindrana razana efa angamba nivadika ho vovoka vao omena dera ?
Samy mikaroka ny valin’izany mety hahafa-po avokoa ka tsy mahita afa-tsy ny fiahiahiana ny fisian’ny teti-dratsy ao ambadik’izany. Tsy mitsitsy mihitsy angamba ireo mpanolo-tsaina ao amin’ny fitondrana ka mamorona ny fanaovana an’izao hetsika azo atao rehetra izao ahafahan’ny filoha hiseho vahoaka. Karazan’ny efa raharaha tapaka moa ny filatsahan’ny filoha eo amperin’asa amin’ny fifidianana ho avy ka tsy mandefitra mihitsy ny tenany amin’ny fanaovana an’izao fihetsiketsehana isan-karazany izao mba hisehoana vahoaka ho tadidin’ny mpifidy rehefa mandatsa-bato izy ireo. Maro no mino mantsy fa ny tarehy mahazatra ny olona ihany no mahasarika ny mpifidy. Iza tokoa moa no hifidy olona tsy mahazatra ? Ny ankizy aza dia afatrafarana lalandava mba tsy hanaraka olon-tsy fantatra.
Eo amin’ny fiarahamonina moa rehefa manga ny resaka dia voan’ny fakam-panahy amin’ny fitarihana resaka. Tonga ho azy noho izany moa ny fanontaniana mikasika ny antony anondrotana an’ireto razana ireto amin’ny sokajin’ny olomangan’ny firenena? Niaran-doza teo am-panatanterahana adidim-panjakana izy ireo ! Mampalahelo izany. Maro anefa ny olom-pirenena na mpiasam-panjakana, na mpiasa amin’
ny sehatra tsy miankina, na mamelo-tena amin’ny fanaovana asa arakaraky ny filan’ny mpanjifa, izay namoy ny ainy eo am-panatanterahana ny asany noho ny fitrangan’ny loza izay nitarika ny fahafatesany. Tsy mitovy hono.